कार चलाउँदा हेल्मेट नलगाएको भन्दै ट्राफिकले काटे ५०० रुपैयाँ जरिवाना ! - Sidha News
कार चलाउँदा हेल्मेट नलगाएको भन्दै ट्राफिकले काटे ५०० रुपैयाँ जरिवाना !
एजेन्सी। भारतमा हालै लागू भएको नयाँ नियमअनुसार नियम तोड्ने सवारी चालकलाई कारवाहीको क्रममा कैयौं रोचक र आश्चर्यजनक घटना भएका छन् । केही दिनअघि एक स्कुटर चालकलाई स्कुटरको मूल्यभन्दा धेरै रकम जरिवाना तिर्न लगाइएको घटना सेलाउन नपाउँदै अर्को अनौठो घटना भएको छ । ट्राफिक पुलिस विभागले एक व्यापारीलाई कार चलाउँदा हेल्मेट नलगाएको भन्दै जरिवानाको चलान काटेको छ ।
कार चलाउँदा हेल्मेट नलगाएको भन्दै चलान काटिएपछि ती व्यापारी अहिले समस्यामा परेका छन् । ट्राफिक विभागका एसपीले यस विषयमा जाँच गराउने बताउँदै चलान काट्ने बेला गलत बटन झुक्किएर दवाइएको बताएका छन् । उत्तरु प्रदेशको बरेलीको यो घटनाका बारे पीडित व्यापारी अनिश नरुलाले ट्राफिक एसपीसँग गएर यसको गुनाो गरेका छन् ।
अनिशलाई यो घटनाबारे आफूकहाँ चलान पुगेपछि मात्र थाहा भएको थियो । अनिशका अनुसार उनीसँग क्रेटा कार छ तर उनलाई पठाइएको चलानमा नम्बर त उनको कारकै छ, चलान भने स्कुटरको काटिएको छ । अहिले अनिश ट्राफिक अधिकारीकहाँ धाइरहेका छन् । एसपीले अनिशसँग निवेदन लिएर उचित कारवाही गरिने बताएका छन् ।